Shiinaha Chainmail Armor Difaacaya warshadda badbaadadaada iyo alaab-qeybiyeyaasha. Boegger
Qalabka Chainmail ee Lagu Sameeyo Mesh Ring Mesh Bixinta Soosaarid Ballaaran
Qalabka Chainmail waxaa lagu sameeyaa siddooyin wareegsan ama fidsan oo isku xidhan. Iyo giraan kasta oo shaati ah waxay si adag ugu xidhan yihiin afarta siddo ee kale mana dhacayaan. Shaarka silsiladda, waxaan soo saarnay, wuxuu leeyahay nashqado badan oo cusub: gacmo-gashi, gacan-badh, gacmo-buuxa, shaati-gaaban iyo shaati dheer. Marka loo eego dookhaaga iyo isticmaalkaaga wax ku ool ah, waxaad dooran kartaa midka ugu habboon. Isla mar ahaantaana, shaarka silsiladda ah ee aannu soo saarnay, ayaa leh farshaxanno jilicsan iyo dusha sare oo dusha sare leh. Markii aad iska siibto, wax dhibaato ah kala kulmi maysid, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ku foorarsato dhexda oo culeysku ha ku caawiyo.
Shaati silsilad ah oo aan gacmo lahayn
Hubka loo yaqaan 'Chainmail' wuxuu ilaaliyaa jirka oo dhan
Waxyaabaha: kaarboon birta, birta birta ah, aluminium dhalaalaya, aluminium anodized, titanium, naxaas, naxaas, naxaas, iwm.
Hababka isku xidhka: riveting, butting and alxeld.
Qaabka isku xidhka silsiladaha: 4-ta Yurub ee 1 isku dhafan.
Daaweynta dusha: daahan zinc, daahan madow, dahaadhay naxaas.
Nidaamka gacmo-gashiga: gacmo-la'aan, gacmo-gaaban, gacmo-badh, gacmo-buuxa.
Macluumaad Dheeraad ah: dhexroor silig iyo dhexroor faraanti ayaa la habeyn karaa.
SS giraanta mesh sida silsiladda maaddada hubka
Mesh giraan midab mesh sida silsilad maaddada hubka
Shaati farshaxan wanaagsan Fiilo kasta waa la xushaa ka hor intaan la duubin oo giraan kastaa waxay si adag ugu xiran tahay afarta siddo ee kale si looga fogaado inay dhacdo.
Khafiif ah oo raaxo leh in la xidho. Shaarka silsiladda silsiladda ah ee aluminium ka samaysan waa miisaanka fudud oo dusha sare ka dhalaalaya. Isla mar ahaantaana, samaynta saddex-geesoodka ah awgeed, shaati-miiraddu si fiican ayey ugu habboonaan kartaa laabtaada.
Kala duwanaansho weyn. Shaati silsilad leh gacmo iyo jaakad dhaadheer ayaa dabooli kara qaybo badan oo jidhkaaga ka mid ah.
Miridhku iyo u caabbinta daxalka. Dusha sare ee shaarka boostada ayaa lagu daadin karaa zinc ama waa la madoobi karaa kaasoo ku siin kara lakab difaac ah.
Waxqabadka iyo qurxinta. Shaarka 'Chainmail' waxaa loo isticmaali karaa oo keliya ilaalinta laakiin sidoo kale waxqabadka.
Shaarka 'Chainmail' oo wata naqshado badan oo cusub iyo xulashooyin badan oo ikhtiyaari ah ayaa qancin kara inta badan macaamiisha shaqooyin wax ku ool ah.
Shaqada ilaalinta. Shaarka loo yaqaan 'Chainmail' wuxuu ka hortagi karaa laabta, gacmaha iyo lugaha sare dhaawac ka soo gaara seefaha, warmaha, mindiyaha, hubka saamaynta leh, iyo qiiqyada, iyadoo weli jidhkaaga laga heli karo dabool buuxa oo isku mid ah
Waxqabadka waxqabadka. Shaatiga 'Chainmail' sidoo kale wuxuu ku fiican yahay doorka ciyaarta doorka tooska ah, dib u soo nooleynta dib u soo nooleynta, soo bandhigida dharka dharka, waxqabadka dharka, dharka dharka, dharka Halloween, cosplay, dharka qurxinta, tiyaatarka, iwm.
Shaqada kale. Shaarka loo yaqaan 'Chainmail' sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa hadiyado kuwa kale, boostada hiwaayadda ah ee DIY, isboortiga dagaal buuxa, superman ama abuurista nin ajnabi ah, ama fikrado kale oo hal abuur leh.
Xiga: Ilaaliyaha Mashiinka Birta oo la Ballaariyey Ka ilaalinta Dadka Ammaan